1200W Na-enwu ọkụ maka Ụlọikpe Nkata China Manufacturer
Nkọwa:Ulo Ogba Ogba Ogba Ogba,Ịgba ọkụ maka Ụlọikpe Bọọlụ Nkata,Egwuregwu Bọọlụ Nkata
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu egwu > Egwuregwu n&#39;èzí > 1200W Na-enwu ọkụ maka Ụlọikpe Nkata
Ihe Nlereanya.: BB-LD-1200W-CQ
Power: 90-99W, 1200W
Nke a elu mmepụta 1200w N'èzí Bọọlụ Nkata n'Ụlọ nwere nwere lumen ọnụ ọgụgụ nke 156,000, na-abịa na ntuhie n'akuku nke 120 degrees. Ejiji ọkụ ndị a dị 1200w maka Ụlọ Egwuregwu Bọọlụ Nkata na-enwu gbaa 5700K ìhè maka n'èzí ụlọ ma ọ bụ ebe buru ibu ma ọ bụ kpuchie ụlọ nkwakọba ihe, yard, ụgbọala ma ọ bụ ebe mmiri.
Egwuregwu Bọọlụ Nkata nwere ọrụ dị ịrịba ama ọrụ ndụ nke awa 50,000. Enwere ike iji ihe ndị a na- eme ka a na-enwu gbaa maka 10 ~ 20 afọ ma ọ bụ karịa dabere n'iji ya, nnukwu ego nchekwa ma belata ụgwọ ọrụ mmezi.
Ọwa ọkụ a na-enwu n'èzí nwere ntule nchebe nkwụsị nke I65, okpukpu ọkụ dị ọkụ na ụlọ aluminom na Anti-UV, iko mmiri na-enweghị nchebe nke Mercury, pụtara mmiri na-enweghị mmiri, ìhè, ogologo ndụ. Ngwurugwu a ma ama nke ugwurugwu a na- eme ka ọ dabara na nhazi dị iche iche, dị ka ebe mmiri, ụlọ nkwakọba ihe, nnukwu onyonyo, ụlọ gas, barns, garages, ụlọ ahịa, ntọala ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ahịa na ebe buru ibu.
Ngwaahịa : Egwuregwu egwu > Egwuregwu n'èzí
800W duziri ọkụ ide mmiri maka bọl bọọlụ Kpọtụrụ ugbu a
800W duziri bọl bọl bọl bọl Kpọtụrụ ugbu a
800W LED n'èzí ámá egwuregwu Kpọtụrụ ugbu a
800W duziri ụlọ njikọ ọkụ ọkụ 5000k Kpọtụrụ ugbu a
960W duziri ụlọ mmezi ọkụ maka egwuregwu bọọlụ Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè Ìhè nke Led Ling 400W Kpọtụrụ ugbu a
Light Light Ìhè Mmiri 800W 104000LM Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè Mkpịsị Ederede na Mmiri nke 300W 39000LM 5000K Kpọtụrụ ugbu a
Ulo Ogba Ogba Ogba Ogba Ịgba ọkụ maka Ụlọikpe Bọọlụ Nkata Egwuregwu Bọọlụ Nkata Ufo Ulo Ogbaghara Russia Ulo Ogwu Ugbo Ulo ahia ahia ahia Mgbaàmà nke Akara Agbara Agbara Agbara 100W Ufo Highbay Alibaba